Umxube weXiaomi Mi olandelayo kunye "nenotshi" ye-iPhone X? | Iindaba zeGajethi
Kwaye yile nto bayibiza ngokuba yi-Apple yase-China. Kukho amarhe athile ajikeleze inethiwekhi asasazeke okomlilo wedobo kunye iifoto zezinto ezinokuthi zibe yimodeli entsha yeXiaomi ngenotshi edumileyo ye-iPhone X entsha, into engenaso nasiphi na isiqinisekiso esisemthethweni esivela kuXiaomi kwaye asikholelwa ngokunyanisekileyo.
Kwelinye icala, ayothusi kwaphela into yokufumana ukufana phakathi kwecebo lika-Apple kunye neemveliso zeXiaomi, kodwa ukuya kugqithiso lokukopa ngokuthe ngqo le thebhu ukuba izixhobo zeApple zibonisa ukuba ziyamangalisa. Khumbula ukuba iXiaomi Mi Mix yongeza ikhamera ezantsi, into engasiqinisekisiyo nathi kwaye asiyikugxeka ukuba inyukela phezulu kwezi nguqulelo zilandelayo, kodwa Ngaba baya kuba nakho ukwenza into esiyibonayo kumfanekiso ophambili kweli nqaku?
Lo ngumbuzo abaninzi bethu abazibuza wona kwaye nguwo Inotshi luphawu olubonisa ukuba ndicinga ukuba luya kuba kwezinye izixhobo ezenziwa yiApple ukusukela ngoku, Kwaye sonke siyazi ukuba ezinye izixhobo zohlobo lwesiTshayina ziyafana kakhulu nezo zeApple, nkqu neelaptops.
I-Mi Mix 2 yinguqulelo elandelayo yesixhobo esidumileyo se-Xiaomi, yona ngokwayo enokufana okufanelekileyo kwi-iPhone X entsha (ishiya ecaleni ukuba ngubani owayiqala ukuyivula) kwaye ngokongeza le thebhu yekhamera kunye nezinye izinzwa singathi bazakuthetha ngobuhle "ngokulinganayo."
Hayi kudala sabona ifowuni ebalulekileyo, I-smartphone eyenziwe nguAndy Rubin, utata we-Android kwaye le nto yayinekhamera ephezulu ngesiqithi esinokuthi ngandlel 'ithile sifane nale ikwi-iPhone X entsha kodwa kwisayizi encinci. Ngaba ngoku iya kuba sisiqhelo esitsha sokushiya olu hlobo lweetab, inotshi okanye okufanayo kwizixhobo ezitsha? Siza kuyibona kwiinyanga ezizayo kodwa asikholelwa ukuba baninzi abaphehlelelwa ukukopa le notch kunye neXiaomi ngaphantsi kunangoku eSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Umxube weXiaomi Mi olandelayo kunye "nenotshi" ye-iPhone X?